Nke a bụ otú ekwentị mkpanaaka mbụ nwere igwefoto na-esi na Samsung apụta dị ka [+ Video] | Gam akporosis
Nke a bụ otú ekwentị mkpanaaka mbụ nwere igwefoto na-esi na Samsung apụta dị ka [+ Video]
Smartphones na retractable n'ihu igwefoto usoro anọwo na ahịa ruo ogologo oge. Nke a bụ otu n'ime ihe ngwọta nke na-ebi ndụ ugbu a na ọkwa na perforation na ihuenyo ahụ, ma na-eche "ihe mmetụta igwefoto a na-adịghị ahụ anya na ihuenyo", teknụzụ nke ka nwere nsogbu ọrụ ma na-aga n'ihu ugbu a.
Lọ ọrụ dịka Xiaomi, Oppo na OnePlus, n'etiti ndị ọzọ, enweworị ụdị nwere kamera mmapụta. Samsung na-ala azụ itinye ya n'ọrụ na ekwentị ya, yabụ na ọ naghị enye ọdụ ọ bụla na sistemụ a, mana nke a nwere ike ịgbanwe, dịka enwere ihe ngosi siri ike nke na-egosi mbata nke ama sitere na South Korea nke nwere igwefoto a na-agbagha agbagha, na anyị na-egosi ya na vidiyo n'okpuru.
Nke a bụ Samsung Samsung na-echere ogologo oge na igwefoto nwere mmapụta
Aha nke ihe nlereanya a ka bụ ihe nzuzo. Anyị kwesịrị ịmata ya n’oge na-adịghị anya, mana anyị amaghị mgbe ọ bụla. N'otu ụzọ ahụ, ebipụtala atụmatụ ya niile site na ntụgharị vidiyo nke anyị kwụgidere n'elu, nke izizi wee wepụta ya OnLeaks, nke jikọtara ya pigtou maka ya.
Ihe a nwere oge dị mkpirikpi nke 21 sekọnd, nke zuru ezu iji hụ ọdịdị nke ngwaọrụ site n'akụkụ ya niile. Ihe na-akpa ọchị bụ ọkpụrụkpụ nke ama, nke yiri ka ọ ga-ekwubiga okwu ókè. Isi okwu a nwere ike ịbụ nkọwahie, dịka Samsung mara maka inye ndị na-enweghị ebughi oke.
Anyị na-ahụkwa okpukpu atọ n'azụ igwefoto na anụ ahụ mkpịsị aka agụ, nke dị na diagonally nso ya. Maka nkọwa ndị a anyị chere na ọ bụ usoro arụmọrụ na-ajụ. N'oge a, enweghị nkwenye ma ọ bụ ozi ọ bụla na-akọwa njirimara na nkọwapụta nke ọrụ nke ihe omimi na onye ga-eme n'ọdịnihu nke ụdị a, mana anyị ga-amata ha n'oge na-adịghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nke a bụ otú ekwentị mkpanaaka mbụ nwere igwefoto na-esi na Samsung apụta dị ka [+ Video]
TSMC na-emepe chipsets 2nm: ha nwere ike ịdị njikere site na 2025
[VIDIO] NA-EME: Kacha mma ANDROidsIS Egwuregwu nke ọnwa maka Eprel